I-1. Kuyini i-Sermorelin Acetate?
I-2. Indlela Yokusebenza-I-Sermorelin Acetate
I-3. Izinzuzo zokuthatha i-Sermorelin Acetate
I-4. Singawasebenzisa kanjani i-Sermorelin Acetate?
I-5. Singabona nini imiphumela ye-Sermorelin Acetate?
I-6. I-Sermorelin Acetate Side effects
I-7. Indawo engcono kakhulu yokuthenga i-Sermorelin Acetate
1. Kuyini i-Sermorelin Acetate?
I-Sermorelin acetate iyinhlanganisela yezokwelapha ehlelekile ngokufana ne-hormone yokukhula yemvelo ekhishwa i-hormone (GHRH).
I-Sermorelin acetate iye yaziwa ngokukwazi kwayo ukugqugquzela i-pituitary gland ukukhiqiza kanye nokuvikela amanye ama-hormone okukhula.
I-Sermorelin Acetate (86168-78-7) iyisimo se-peptide esakhiwa yi-bio-identical synthetic synthetic eyenziwe ngama-amino acids e-29. I-FDA igunyaze le mithi yokwelashwa kwezingane, kodwa imithi eminingi emhlabeni wonke isebenzisa i-Sermorelin Acetate ngaphandle kwelebula ukuze kukhuliswe amazinga e-hormone ekukhuleni kwiziguli ezikhulile.
Ngokungafani nezinye izithako ze-HGH, i-Sermorelin Acetate ingasetshenziswa ngaphandle kwelebula. Ngakolunye uhlangothi izindleko zeSermorelin nazo ziphansi uma kuqhathaniswa nezinye izidakamizwa ezifanayo. Lesi sidakamizwa sinqunyelwe ukuthi sisetshenziswe ebusuku futhi kufanele sithathwe okungenani isigamu sehora ngaphambi noma emva kokudla. Ukuthatha i-Sermorelin Acetate ebusuku kuqinisekisa ukuqhutshwa okugcwele komjikelezo wemvelo womzimba wakho we-hormone yokukhula kanye nokugqugquzela ingubo yakho ye-pituitary kulo lonke ukulala kwe-REM. Ngakolunye uhlangothi, i-Sermorelin Acetate itholakala ngezinhlobo ezimbili, okungukuthi I-Oral Sermorelin amalungiselelo kanye nefomu ejoyiwe nge-lyophilized.
2. Indlela Yokusebenza-I-Sermorelin Acetate
I-Sermorelin isebenza ngokugqugquzela ukukhiqizwa kwama-hormone okukhula emzimbeni futhi ikakhulukazi inqunyelwe izingane ezinezinkinga ze-hormone. Nakuba lesi sidakamizwa sivunyiwe ukuba sisebenzise ezinganeni, odokotela baye baqaphela nokuthi i-Sermorelin nayo ibalulekile futhi iyasiza uma kunqunywe abantu abadala. Isibonelo, abanye abadala Ukulwa nokuguga neSermorelin kuyilapho abanye bekhululekile ngeSermorelin kanye nokulahlekelwa isisindo. Isidakamizwa senza izigulane ze-pituitary ukukhiqiza ama-hormone amaningi okukhula emzimbeni wakho.
I-GHRH iyi-peptide equkethe i-29% yamino acid ekhona kuma-hormone okukhula. Lawa ma-amino acids yiwona aphumelelayo kakhulu ku-GHRH. Ngokuvamile, njengoba abantu bekhula, ama-hormone okukhula abanjwe ngilazi ye-pituitary ayengenayo futhi iningi lezifundo ezenziwa ochwepheshe bezokwelapha ezihlukahlukene ziye zafakazela ukuthi i-Sermorelin ikwazi ukubuyisela amazinga e-hormone okukhula emzimbeni wakho emazingeni omusha ngokuphakamisa i-IGF-1 ( I-Factul Growth Factor 1).
Kodwa-ke, indlela engcono kakhulu yokuthola izinzuzo ze-acetate ye-Sermorelin ukuthatha isilinganiso esifanele futhi ulandele imiyalelo yesilinganiso somdokotela wakho. Ukwedlulela ngokweqile lesi sidakamizwa kungaholela emiphumeleni emibi engaphenduki noma ngisho nokuhlolisisa ukuthi uthuthukise izimo zezempilo. U-Underdosing naye uzokuphika ithuba lokujabulela izinzuzo ze-acetate ze-Sermorelin. Kungakhathaliseki ukuthi ungakwazi ukufinyelela kalula izidakamizwa kusuka kumapulatifomu e-intanethi noma ngisho nasekhemisini, ungaqali ukuthatha imithi ngaphandle kokuhlolwa kwezokwelapha.
3. Izinzuzo zokuthatha i-Sermorelin Acetate
Nakuba i-Sermorelin ibiza liphansi kuneleminye imithi efanayo emakethe, inikeza imiphumela emihle. Kukhona okuhlukahlukene I-Sermorelin Acetate imiphumela ukuthi abasebenzisi noma iziguli ezithatha kahle futhi zilandele imiyalelo kadokotela. Enye yezinzuzo ezibalulekile zokusebenzisa lesi sidakamizwa ukuthi ungakhetha ifomu lezilingo elikhululekile nawe. Kukhona umthamo womlomo uma unganelisekile ngamajojo futhi ungaya futhi nesilinganiso esingenayo, kepha imiphumela ifana nayo. Ukubuyekezwa kwe-Sermorelin Acetate futhi kuyindawo engcono kakhulu yokubheka izinzuzo abanye abasebenzisi abazijabulela emva kokuthatha lesi sidakamizwa. Kunezinye izinzuzo ezibalulekile oyozijabulela ngokuthatha lesi sidakamizwa, futhi zifaka:
★ I-Sermorelin Acetate yokulwa nemiphumela yokuguga
Lesi sidakamizwa sithathwa njengenye yezinto ezingcono kakhulu zokuguga emakethe ngoba kusiza ekuthuthukiseni izicubu namaseli awonakele emzimbeni wakho. Lokhu kugcina isikhumba sakho sisesimweni esihle kanye nentsha, ngaleyo ndlela kuncishisa imiphumela yokuguga njengemigqa emihle esikhumbeni nasezingxenyeni ezibuthakathaka. Amazinga aphansi e-hormone yokukhula ashintshela ekubukeni kwakho futhi uyaziwa ngokuba imbangela enkulu ye-droopy noma isikhumba esibucayi nama-wrinkles. Iningi le Sermorelin Ukubuyekezwa kwe-Acetate kubonisa ukuthi abasebenzisi abaningi bezidakamizwa bayajabula ngemiphumela engaphezulu ngakho ekuqedeni izimpawu zokuguga.
Emhlabeni wonke, izigidi zabantu Ukulwa nokuguga neSermorelin kanye nemiphumela iyamangalisa kakhulu. I-Sermorelin iphinda ivuselele ukusebenza okujwayelekile komzimba wakho ngokulungisa zonke izinkinga ezibangelwa i-HGH enganele. Amandla okusebenzisa izidakamizwa ukuqala impendulo yomzimba evamile kanye nenqubo yokuzivikela ephendula amazinga aphakeme e-HGH kwenza abasebenzisi bathuthukise ukubukeka kwabo futhi bancishise izimpawu zokuguga.
★ I-Sermorelin Acetate ye-Weight Loss
Ucwaningo oluningi oluqhutshwa izazi ezahlukene luye lwafakazela ukuthi abantu abadala abagcizelele ukukhuluphala nokulahlekelwa isisindo kungaba namazinga aphansi e-hormone kunabo abanesisindo esinempilo. Eqinisweni, abantu abaningi bakhetha iSermorelin futhi kwesisindo umthamo wokulungisa isisindo sabo. I-Sermorelin acetate iye yafakazelwa ukuthi iyisidakamizwa esifanele ukusiza ngokweqile abantu abachitha isisindo esiningi ngokweqhinga lokukhiqizwa kwe-hormone emzimbeni. Isidakamizwa sibhekene nokukhula kwamahomoni okukhula emzimbeni, okuholela ekwakhiweni kwethambo lomzimba nobukhulu bomzimba kanye nokunciphisa amafutha omzimba. Ukuze uthole olunye ulwazi, thintana nomuthi wakho wokulahlekelwa isisindo noma udokotela wezokudla.
★ Ezinye izinzuzo ze-Sermorelin Acetate
Kukhona nezinye izinzuzo oyozijabulela ngokuthatha lesi sidakamizwa esinamandla kahle, futhi zilandelayo:
Ukuthuthukiswa Kwamaminerali Okuthuthukisiwe; Ucwaningo lweSermorelin ziye zafakazela ukuthi ukungabi nalutho kweHGH kakhulu kubantu abadala kuholela ekunciphiseni kwamathambo, okwandisa ingozi yokuhlukunyezwa kwe-osteoporosis. Ukuthatha i-Sermorelin cishe ngezinyanga ezingu-12 noma ngaphezulu kungathuthukisa ubukhulu bethambo kanye nokunciphisa amathuba okuthuthukiswa kwe-osteoporosis.
Ithuthukisa amandla omzimba; Ngenxa yezinguquko ezidalwa ngumuthi wakho emzimbeni wakho, ngokuthuthukisa ukukhiqizwa kwe-hormone yokukhula, okuholela ekwakheni imisipha, kubuye kukhulise amandla omzimba. Uzothola imiphumela engcono ngemuva kokuthatha lesi sidakamizwa ngezinyanga ze-12.
Thuthukisa ukushayela ucansi: abantu abanamazinga aphansi e-hormone yokukhula ngokuvamile banenkinga nge-libido yabo ngenxa yamazinga aphansi omzimba womzimba. Iningi labantu abadala asebenzise i-Sermorelin acetate baye babika ukuthuthukiswa nge-sex drive yabo kanye nokuthola isixazululo se-ejaculation ngaphambi kwesikhathi.
Thuthukisa ukuqina kwesikhumba; ukunciphisa kwe-collagen yesikhumba nokuhlunga kwemiphumela yezinga eliphezulu le-hormone yokukhula emzimbeni wakho. Ngenhlanhla, i-Sermorelin Acetate yiyona mithi engcono kakhulu yokuxazulula zonke lezi zimo zesikhumba.
I-Metabolism; Ukwehla kwamakhomikhali e-hormone emzimbeni wakho kuholela ekunciphiseni umzimba wokuphumula, futhi ukwelashwa kwe-Sermorelin Acetate kungadlulisa lesi simo. I-HCGH yokwelashwa ibuye iqale indima ebalulekile ekwandeni amaprotheni synthesis, ivuselele umthambo we-carbohydrate, futhi ikhulise ukhiqizwa kwamafutha kanye nokwehlisa i-cholesterol embi. Imiphumela ye-metabolism ekuthuthukiseni amazinga e-HCG nawo aholela emzimbeni omuhle kakhulu wezempilo nokubunjwa.
Ezinye zezinye izinzuzo zeSermorelin Acetate zihlanganisa; ukukhuthazela okwandayo, ukuqina komzimba okunamandla, ukuphulukisa ukulimala, ukuqinisa ingculazi nempilo yempilo, nokulala kwekhwalithi.
4. Singawasebenzisa kanjani i-Sermorelin Acetate?
Ukusetshenziswa kwanoma imuphi umuthi kakhulu ngakho SI-ermorelin I-Acetate kufanele iqondiswe futhi iqondiswe udokotela wakho ngemva kokuhlolwa kokudokotela. Ngezinye izikhathi umthamo oshiwo kule ilebula ungaba ngaphezulu noma ngaphansi kuye ngokuthi izinga lendinganiso oyidingayo. Ngakho-ke imithi yakho kufanele isethe isilinganiso esifanele futhi ujikeleze ngemiphumela engcono. Ukulinganisa kakhulu kuxhomeke kulokho okudingayo ukufezekisa isibonelo I-Sermorelin nokulahleka kwesisindo Umthamo ungase uhluke kwi-Fighting Aging ne-Sermorelin dose. Qinisekisa ukuthi ulandela yonke imiyalelo enikezwe udokotela wakho futhi uphakamise konke okukhathazayo naye ngaphambi kokuba uqale ukuthatha isilinganiso se-Sermorelin Acetate.
Ngokujwayelekile, i-Sermorelin Acetate ilawulwa ngomjovo ekhaya lakho, ehhovisi likadokotela, noma ngisho nasemtholampilo oseduzane. Ngaphandle kwalokho, imithi yakho ingakuqeqesha ukuthi ungazifaka kanjani ekhaya ngaphandle kokuvakashela njalo emtholampilo ngesilinganiso. Kodwa-ke, uma ujova umthamo, qiniseka ukuthi ulandela izinqubo zokujova ngendlela efanele njengoba ufundiswa imithi. Ukweqa ngokweqile noma ukujova okungalungile kungaholela emiphumeleni emibi kakhulu, akulona lokho okulindele uma uthatha i-Sermorelin Acetate. Futhi, khumbula ukucabangela okulandelayo uma uthatha isidakamizwa;
Hlola ukuthi i-Sermorelin Acetate ikhishwa yini noma iqukethe ezinye izinhlayiya, uma kunjalo ungayisebenzisi. Ngakolunye uhlangothi, uma iwayini lilimazekile noma liphukile, futhi ungahlali kude nomuthi bese uzisa udokotela wakho ngokushesha ukuze uthole isiqondiso.
Ungalokothi ugudle i-acetate yeSermorelin uma uyixuba.
Njalo qiniseka ukuthi wena inject i-Sermorelin acetate emva kokuxuba. Kunconywa ukuthi ulahle umuthi ongasetshenzisiwe.
Uma ngabe usebenzisa noma yikuphi okunye ukukhula kwe-hormone, kufanele uyeke ukuthatha okungenani isonto elilodwa ngaphambi kokuba uqale ukuthatha isilinganiso sakho se-Sermorelin acetate. Phakamisa yonke imibuzo yakho noma ukukhathazeka ngemithi yakho noma abakwa-pharmacy bese uyamtshela uma uphansi kwemithi yesimo esifanayo noma esinye sezokwelapha. Lokhu kuzokwenza kube lula kudokotela wakho ukunikeza iseluleko esifanele ngoba ezinye izidakamizwa zingaphazamisa imisebenzi yeSermorelin emzimbeni wakho.
Njalo, qiniseka ukuthi ugcina imithi, izikhwama eziphuma ezinganeni zifika futhi zihambe nezilwane ezifuywayo. Ungalokothi uphinde usebenzise izinaliti noma nanoma iyiphi enye into oyisebenzisayo ekuqondiseni Isilinganiso se-Sermorelin. Esinye isici esibalulekile ukuthi ulahla kanjani umkhiqizo ngemuva kokusetshenziswa. Xhumana nodokotela wakho, ukuze akululekele emithethweni enhle neyendawo yokulahlwa okufanele kwemikhiqizo yemithi endaweni yakho.
Uma kwenzeka ulahlekelwa yisiphi isilinganiso se-Sermorelin Acetate, qiniseka ukuthi uyithatha esikhathini esifushane kunokwenzeka. Kodwa-ke, uma uqaphela sekwephuzile uma sekusele isikhathi sesilinganiso esilandelayo, ungakwazi ukweqa umthamo ongabanjwanga uphinde uthuthele kokulandelayo. Ungathathi i-dose ephindwe kabili ukuze uhlawulele lowo olahlekile ngoba lokho kuzodlula ngokweqile futhi kungaholela ekubhekaneni nemiphumela emibi. Ungazisa futhi udokotela wakho ukukukwazisa ngokufanele uma ubona ukuthi ulahlekelwe umthamo wakho.
Ngaphezu kwalokho, i-Sermorelin nokulahlekelwa kwesisindo kungaba umqondo omuhle uma uhamba nomthamo ngokudla okufanele nokusebenza kahle.
(1) Iyiphi indlela ye-Sermorelin Acetate etholakalayo?
Lesi sidakamizwa sikhona emafomu amabili aphambili, afaka umjovo kanye nama-Oral preparations, kodwa bobabili baletha imiphumela efanayo. Amafomu afaka;
♦ Ifomu elingenayo igciwane -Leli ifomu elingenayo injini ye-Sermorelin Acetate okusho ukuthi kufanele ilawulwe kuphela nge-injection. Ungazifaka noma uhlele ukuvakashelwa okujwayelekile emakethe wakho wezokwelapha ukuphatha umthamo. Ezimweni eziningi, udokotela wakho uzokuqeqesha ukuthi ungazifaka kanjani ekhaya ngoba uzodinga ukuthatha isidakamizwa ngezinyanga ze-12 noma ngaphezulu.
♦ Amalungiselelo omlomo -Nansi ifomu le-Sermorelin Oral, okusho lapha akudingeki ukuba ube nezinhlungu zokugaya. Ungakhetha ifomu elihle kakhulu le-dosage yakho, kuye ngokuthi yini oyikhululekile ngayo. Uma ungahambi kahle ngemishanguzo, ungahlala ucela udokotela wakho ukuba anike umthamo womlomo. Khumbula, awukwazi ukuthatha kokubili umlomo nomuthi ongenayo ngesikhathi esifanayo.
(2) Ngaphambi kokusetshenziswa; yini okudingeka ukwazi?
Kudingeka uqaphele kakhulu uma uthatha lesi sikhukhula sokukhulisa izidakamizwa kusukela uma ungathathwa ngendlela efanele kungaholela emiphumeleni emibi kakhulu. Ungathengi i-Sermorelin Acetate kusuka ekhemisi noma ngisho nasezikhungweni ze-intanethi bese uqala ukuyisebenzisa ngaphandle kweseluleko somuthi wakho. Khumbula, imizimba yabantu ihlukile futhi nje ngoba lesi sidakamizwa sisebenzela umngane wakho, akusikho okuzenzakalelayo ukuthi kuyokuhamba kahle nawe. Yingakho kunconywa ukuba uhlole ukuhlolwa kwezokwelapha futhi uvumele ochwepheshe bakho bezempilo ukuba akubekele isilinganiso esilungile. Yazisa udokotela wakho, uma ungaphansi kwanoma imuphi omunye umuthi kusukela ezinye izidakamizwa zingase zingasebenzi kahle nge-Sermorelin Acetate. Ezinye zezimo zezempilo okufanele uzise udokotela wakho uma uzibandakanya;
Uma uhlela ukukhulelwa noma usuvele ukhulelwe noma ngabe uyamncelisa. Lokhu kuzosiza udokotela wakho ukuklama isilinganiso esihle kakhulu sokuqinisekisa ukuthi isidakamizwa asithinti ingane noma ingane.
Uma kwenzeka uthatha noma yimiphi imithi engekho emthethweni noma imithi kadokotela, isithasiselo sokudla, noma uma uthatha noma yikuphi ukulungiselela imithi. Ezinye izidakamizwa zingase zingasebenzi kahle ne-Sermorelin Acetate, futhi kuhle ukukwazisa imithi yakho ngaphambi kokuba uqale umjovo wakho noma umlomo womthamo.
Uma uthola ukwelashwa kokunye ukudla, imithi, noma ezinye izinto.
Futhi, tshela udokotela wakho uma uke waba nokulimala noma ukulimala kwekhanda ukuthi uphansi kokwelashwa noma ukuthi ngezinye izikhathi ubuyele emuva.
Ezinye izidakamizwa zingase zisebenzisane kahle ne-Sermorelin Acetate, kanti ezinye zinganciphisa ukusebenza komuthi. Ngakho-ke, njengoba kushiwo ngaphambili, kuhle ukutshela udokotela wakho nganoma yimiphi imithi oyithathayo ukuze akululekele ngendlela efanele. Ezinye izidakamizwa zingase zincome ukuthi uqale ukuqeda izidakamizwa okwamanje ozithathayo bese uqala ukuthatha i-Sermorelin Acetate noma uma zingenayo umthelela ungathatha kokubili imithi ngesikhathi esisodwa. Unganqikazi ukwazisa umhlinzeki wakho wezokwelapha uma usebenzisa izidakamizwa ezilandelayo;
I-cyclooxygenase inhibitors, njenge-indomethacin ne-aspirin, i-glucocorticoids efana ne-prednisone, i-Insulini, noma imithi enganciphisa amazinga wegciwane lomzimba wakho njenge-Propylthiouracil. Ezinye zihlanganisa i-somatostatin equkethe izidakamizwa ezikhipha i-somatostatin njenge-levodopa, ne-clonidine kusukela ekunciphiseni amandla eSermorelin futhi ungase ungaboni kakhulu I-Sermorelin Acetate imiphumela ngisho nangemva kokuthatha imithi isikhathi eside.
Uhlu lwezidakamizwa ezingase zithinte ikhono le-Sermorelin Acetate lokusebenza emzimbeni wakho lide kakhulu, yingakho kuhlale kubalulekile ukwazisa udokotela wakho kunoma imiphi imithi oyithathayo ngemiphumela engcono. Ngezinye izikhathi, ngisho nemithi ocabanga ukuthi ayithinti, njengemithi yemithi ingabangela imiphumela emibi kakhulu. Ungacabangi lutho uma udinga ukuzwa imiphumela engcono futhi esiphezulu. Ukuze uphephe futhi qinisekisa ukuthi uhilela udokotela wakho kwinqubo yonke yemithi. Ukuhlolwa kwezokwelapha kudlala indima ebalulekile ngaphambi, ngesikhathi nangemva kokuqeda umjikelezo wesilinganiso.
Ngaphezu kwalokho, ukuhlola i-Laboratory kungenziwa ngumdokotela wakho ukuqapha amazinga e-hormone yokukhula, imiphumela emibi, kanye nenqubo yokwelashwa. Qinisekisa ukuthi udumisa wonke ama-aphoyintimenti akho kadokotela ukuze uthole izinzuzo eziphezulu ze-Sermorelin Acetate. Kwabesifazane, uma uqaphela ukuthi ukhulelwe ngesikhathi sokulinganisa kwakho, sazise imithi ngokushesha. Nakuba, akucaci lokho umuthi ongakwenza kumntanakho noma ingane yakho, akuphephile ukuqhubeka uthatha i-Sermorelin Acetate uma uncelisa noma ukhulelwe. Noma kunjalo, kungemva kokuhlolwa kwezokwelapha lapho udokotela wakho engakhonza khona. Ungalokothi uthathe umthamo lapho kulesi simo ngaphandle kokukwazisa imithi yakho.
5. Singabona nini imiphumela ye-Sermorelin Acetate?
Kokubili i-HGH ne-IGF ifihliwe ngokuqhubekayo futhi ingabi njalo. Ngakho-ke, ukuhlola okungahleliwe kwegazi nokuhlaziywa kungase kunganele ukunquma ukuthi i-Sermorelin Acetate iqalile ukusebenza noma cha. Amaningi odokotela abanika i-Sermorelin Acetate noma imithi efanayo ehlola ukuphumelela kwezidakamizwa nge-symptomology, okuyinto yokuhlola izimpawu ukuhlaziya izinzuzo zemithi, ukubukeka ngokomzimba, nokuhlolwa kwegazi.
Uzoqala ukuzuza izinzuzo ze-Sermorelin Acetate ngemuva kokuqala ukulala nokukhwalwa kwekhwalithi emva kwamasonto ayisikhombisa ukuthatha isilinganiso sakho. Noma kunjalo, lokhu kungabonwa kalula ngabanye abanenkinga yokuthola izinga lokulala. Amazinga omzimba womzimba nawo azokhushulwa, futhi isimo sakho somoya sizothuthukiswa.
Ngokujwayelekile, iziguli eziningi ziqala ukubika izinguquko ezinkulu emzimbeni emva kwezinyanga ezintathu kuya kweziyisithupha ze-Sermorelin Acetate therapy ikakhulukazi iSermorelin kanye kwesisindo. Eminye yemiphumela ebonakala kakhulu ye-hormone yokukhula emzimbeni ihlanganisa ukuthuthukiswa kwesisindo somzimba osondayo nokuthuthukiswa okukhulu kwempilo yomzimba jikelele. Abantu abadala abahlukumeza ukuguga nge-Sermorelin bangase baqale ukuthola imiphumela phakathi nezinyanga zokuqala ze-3.
Ukuze uthole imiphumela engcono, udinga ukujova i-Sermorelin njalo ngoba isuswa ohlelweni lwakho lomzimba ngokushesha. Izindlela zokusebenza kwezidakamizwa zixhomeke kakhulu ekuxhumaneni kwezinqubo zakho eziphilayo eziholela ekukhiqizeni ngcono amahomoni okukhula. Futhi, ngokuya ngesistimu yakho yomzimba, ungase uqale ukubona imiphumela ye-Sermorelin Acetate ngemuva kwezinyanga ze-3 noma ze-6 kusukela kuthatha isikhathi amazinga we-hormone yokukhula ukusebenza futhi ahambise imiphumela efunayo.
Asikho isikhathi esicacile ukuthi iSermorelin Acetate kufanele ithathwe, kodwa kufanele unciphise noma uyeke ukuthatha izidakamizwa emva kokuthola i-hormone yokukhula amazinga aphezulu. Yingakho ukuhlolwa kwama-Lab okuvamile kubalulekile ukuqapha amazinga e-hormone. Udokotela wakho uzoba umuntu ofanele ukunciphisa noma ukwelulekwa ukuba uyeke ukuthatha isisindo sakho ngemuva kokuhlolwa kokudokotela. Ezinye iziguli zithatha ngisho ne-Sermorelin Acetate cishe ngezinyanga ze-12 noma ngaphezulu ngaphambi kokuba zifinyelele amazinga ama-hormone okukhula.
6. I-Sermorelin Acetate Side effects
Iningi lezidakamizwa emakethe uma kungenabo bonke abanemiphumela emibi engaba encane noma enzima kakhulu uma umuthi ungasetshenzisiwe ngendlela efanele. Ukubuka ukubuyekezwa kwe-Sermorelin Acetate abanye abasebenzisi babika ezinye izimpawu zemiphumela emibi. Kodwa-ke, iziguli ezilandela yonke imiyalelo yokulinganisa, futhi zihlolwa njalo, zibika imiphumela emibi kakhulu yeSermorelin Acetate.
Kunconywa ukuthi ubike noma yimiphi imiphumela esengaphambili oyithola ngemuva kokuthatha le mithi yokukhuthaza i-hormone. Izindaba ezinhle ukuthi udokotela wakho angakusiza ukuba ulawule imiphumela emibi ye-Sermorelin Acetate uma umtshela ngesikhathi. Eminye imiphumela emibi engavamile ongayithola uma uthatha umthamo wakho kufaka;
Ukukhanda ikhanda futhi ngezinye izikhathi ukunambitheka okungajwayelekile emlonyeni wakho.
Ubuhlungu, ubuhlungu, ukuvuvukala, noma ubomvu endaweni yomjovo.
In the Ukubuyekezwa kwe-Sermorelin Acetate abanye abasebenzisi bakhulume ukudumala kwabo kanye nokuhlangenwe nakho okubi ababenakho ngezidakamizwa ezivamile uma ungahambisani nemiyalelo yesilinganiso. Imiphumela emibi yocala iyanyamalala nesikhathi, kodwa uma ihlala isikhathi eside kunalokho okulindelekile ukukhuluma nodokotela wakho ukukusiza uthole isixazululo ngaphambi kokuba isimo siphume. Kodwa-ke, kunezinye imiphumela emibi kakhulu lapho uhlangabezana nazo, kufanele ushayele imithi yakho ngokushesha ngoba ingaholela esimweni sempilo esiphuthumayo noma esingenakuphika. Lemiphumela emibi ihlanganisa;
Ukusabela okunomsoco okunjengezinyosi, ukuqhuma, ukuphefumula, ukuqina kwesifuba, ukuvuvukala kobuso, izindebe, umlomo, noma ulimi lwakho.
Lezi akuzona zonke imiphumela emibi ye-Sermorelin Acetate ukulindela ngoba ezinye zazo zingase zithembele kumuntu othatha isidakamizwa. Kungaba umbono omuhle ukukwazisa udokotela wakho uma ubona noma yini engavamile uma uthatha isilinganiso sakho. Kodwa-ke, indlela engcono kakhulu yokuzivikela kulezi zemihelo yocansi ukunamathela emiyalweni yokulinganisa kanye nokuhlonipha wonke ama-aphoyintimenti akho odokotela ukuhlolwa kwezokwelapha. Ukweqa ngokweqile kuyimbangela eyinhloko yemiphumela emibi ye-Sermon Acetate. Ngakho-ke, uma usola ukuthi uthathe isilinganiso esingaphezu kwesimiso, mane ushayele udokotela wakho noma uvakashele isikhungo sezempilo esiseduze ukuze uthole usizo.
7. Indawo engcono kakhulu yokuthenga i-Sermorelin Acetate
Indlela kuphela yokuthola imiphumela engcono kakhulu ye-Sermorelin Acetate ukuqinisekisa ukuthi uyithenga kumthengisi onokwethenjelwa futhi ohloniphekile. Kungakhathaliseki ukuthi udinga ukulwa nokuguga nge-Sermorelin noma ukulawula isisindo sakho somzimba, izidakamizwa eziphezulu ziqinisekisa ukuthi wena uphezulu futhi uyashesha imiphumela uma ulandela imiyalelo yokulinganisa. Kuningi abathengisi baseSermorelin emakethe, kodwa ukuthola ilungelo akulula lokho uma ungaqapheli. Udokotela wakho angaba umuntu ongcono kakhulu ukukusiza ukuthenga i-Sermorelin Acetate.
Ngaphandle kwalokho, ungabheka abathengisi abahamba phambili ku-intanethi, kodwa qiniseka Thenga i-Sermorelin Acetate kusuka kumkhiqizi onolwazi futhi othembekile noma umphakeli we-Sermorelin. Ungazithengi nje imithi kusuka kunoma iyiphi ikhemisi noma umthengisi we-inthanethi uthola inthanethi ngoba abanye banesithakazelo ekwenzeni inzuzo futhi bangenalo ikhwalithi engcono kakhulu ye-Sermorelin eqinisekisa imiphumela emihle kakhulu.
Ngaphambi kokuba uthenge i-Sermorelin Acetate, bheka ukubuyekezwa kwamakhasimende kumthengisi ukukusiza wenze isinqumo esinolwazi. Njengamanje, singumkhiqizi we-Sermorelin Acetate omuhle kakhulu esifundeni. Senza ukudiliva okufike ngesikhathi, emhlabeni jikelele nakithi Izindleko zeSermorelin liphansi kakhulu uma liqhathaniswa nelomthengisi abaningi emakethe. Udinga kuphela ukwenza i-oda lakho nge-smartphone yakho, ikhompyutha noma ithebulethi, futhi sizoletha umkhiqizo wakho esikhathini esifushane kunokwenzeka. Imigqa yethu yokushaya ucingo ivulekile i-24 / 7, futhi ungaqiniseka ngokuthola usizo olusheshayo kwethimba lethu lezinkonzo zamakhasimende noma nini lapho uxhumane nathi. Futhi, sibheke izibuyekezo zethu ze-Sermorelin Acetate futhi uzobona ukuthi iningi lamakhasimende ethu linelisekile ngemikhiqizo yethu.
Sihlale sinxusa wonke amakhasimende ethu ukuthi athenge i-Sermorelin Acetate kuwebhusayithi yethu kodwa angayisebenzisi ngaphandle kokuhlolwa kwezokwelapha. Udokotela kuphela okufanele abeke umthamo ofanele ngesimo sakho futhi akusize ulawule noma yimiphi imiphumela emibi engase ivele uma usebenzisa izidakamizwa ezifana ne-Sermorelin Acetate. Phakamisa yonke imibuzo yakho noma ukukhathazeka ngomhlinzeki wakho wezokwelapha ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa imikhiqizo yethu ukuze ujabulele izinzuzo eziningi ze-Sermorelin Acetate.
UJanvier, S., Cheyns, K., Canfyn, M., Goscinny, S., De Spiegeleer, B., Vanhee, C., & Deconinck, E. (2018). Ukunyatheliswa kokungcoliswa kwezidakamizwa ze-polypeptide ezikhohlisiwe kakhulu ezitholakala emakethe yaseBelgium. I-Talanta, 188, I-795-807.
Weber, C., Krug, O., Kamber, M., & Thevis, M. (2017). Ukuhlaziywa okufaneleko nokulinganisako kwemikhiqizo yokudotshwa ebanjwe eSwitzerland Border. Ukusebenzisa izinto nokusetshenziswa kabi, 52(6), i-742-753.
Makimura, H., Feldpausch, MN, Stanley, TL, Sun, N., & Grinspoon, SK (2012). Ukwehla kwe-hormone yokunciphisa ekukhusheni kuhlotshaniswa ne-LDL encane ne-HDL usayizi wezinhlayiyana. I-endocrinology yezokwelapha, 76(2), i-220-227.
I-Oxytocin Acetate: I-hormone yothando ezokwenza ngcono ubuhlobo bakho